FANAFIHANA TAO BELO TSIRIBIHINA : Tovolahy vao erotrerony nofirafirain’ny dahalo
Niverina indray ny asan-dahalo ao amin’ny distrikan’i Belo Tsiribihina tato ho ato. Nitrangana fanafihan-dahalo tao Tanandava, distrika Belo amoron’i Tsiribihina, ny alahady alina, ka tovolahy eo ho eo amin’ny 26 taona no nofirafirain’ny malaso fibara. 8 mai 2018
Manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly ao an-tampon- tanàna ny niharam-boina, ankehitriny, ka miady amin’ny fahafatesana, raha ny tatitra voaray farany. Voalaza fa nidiran’ny jiolahy an-keriny tao amin’ny tokantranon’ity mpamboly voatafika ity . Tsy nijery fotsiny anefa ny tovolahy nandritra ny fanafihana fa nanohitra ireo dahalo, ka izy indray no lasibatr’ireo olon-dratsy tamin’ izany.
Norobain’ izy ireo avokoa ny vola sy entana rehetra tao amin’ity tokantrano ity ary nandositra izy ireo avy eo. Mbola tafantso vonjy ilay niharam-boina, ka nahare izany ny mponina manodidina dia nikoropaka namonjy azy. Io alina io ihany dia nitondra ity farany any amin’ny hopitaly ao Belo Tsiribihina ny fokonolona. Voalaza fa mipetra-drery ny tovolahy ary ny fambolena no tena antom-pivelomany. Raha ny vaovao voaray farany dia mbola tsy mahatsiaro tena ny lehilahy, omaly maraina, fa efa manao izay azony atao kosa ny mpitsabo ao an-toerana.
Valy faty no ahiana ho nahazo ity tovolahy nisy namono ity satria nisy ny disadisa tamin’olona izy, hoy ny fianakavian’ny niharam-boina.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2467) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021